Global Voices teny Malagasy · 17 Oktobra 2017
Tantara tamin'ny 17 Oktobra 2017
Barhain: Toy Ny Adidy Nasionaly Ny Fampirafesana
Raha maro ireo mitady asa ao Bahrain, Silly Bahraini Girl [Ang], kosa izay monina ao Kanadà amin'izao fotoana izao, tsy mahandry ny fotoana hodiany an-tanindrazana hanaovana fitsidihana iray, satria tsy mila manao na inona na inona intsony izy.
Amerika Latina17 Oktobra 2017
Nosakanan'ny Polisy Sy Ny Andian'Olona Anti-Komonista Tsy Hiresaka Momba Ny Vono Olona Taona 1965 Tao Indonezia Ireo Vondrona Mpiaro Ny Zon'Olombelona
Ny tsy fihetsehan'ny polisy hanakana ity herisetra ity dia manampy amin'ny fanimbana ny demokrasia sy ny fanitsakitsahana ny zon'ny fahalalaham-pitenenana sy ny fivoriana ao Indonezia.
Azia Afovoany sy Kaokazy17 Oktobra 2017
Iray amin'ireo bilaogera malaza indrindra ao Shily ilay mpitantana dokambarotra Roberto Arancibia . Ny feony feno hatsaram-panahy sy ny fomba fijeriny feno fanantenana no ahaizany mandanjalanja ny fanadihadiana lohahevitra isankarazany. Nefa tsy mikaroka firy izay mety hahaliana amin'ny adihevitra politika ny bilaoginy El Mundo Sigue Ahí ("Mbola Eo Ny Tontolo ").